Sidee si ay ula socdaan oo Masax Android Phone aan Socodka Apps
Ma waxaad tahay Cunid misplacing telefoonka aad android? Dhumo telefoonka aad android laga yaabaa in aanay daruuri marayo hab tuugo ah, waqti aad u aamineysaa in laga yaabo agagaarka gurigaaga. Waxa si qalad ah hoos u yaabaa marka aad u socoto in ay ka shaqeeyaan. Haddii ay dhacdo ah halkaas oo mid ka mid ah kuwo ku dhici aad iyo aad u maqan telefoonka, weli waxa aad u helida, in hal technology kar daalin mahad. Waxaad sidoo kale u helida telefoonka isticmaalaya barnaamijyadooda ama aan barnaamijyadooda. Iyada oo aan la isticmaalayo barnaamijyadooda raadraaca waxaad isticmaali kartaa maamulaha Google ee Android qalab (TV), Google Map Goobta Taariikhda iyo Google AirDroid. In this article Ujeeda ugu weyn waxaa raadraaca telefoonka Android isticmaalaya Manager Device Android.
Calan u Manager Device Android si ay ula socdaan Or Masax Phone
Tababare Device Android waa app account Google a kuu oggolaanaysa in aad ka heli telefoonka aad badiyay si fudud. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad tirtiri xogta laga telefoonka aad laga badiyay. Waxaad heli kartaa app TV online ah ama kala soo bixi, waxa uu casriga ah. Si aad u bilowdo hawsha ka mid ah raad aad telefoonka ee kiiska wax alla waxa ka maqan, waa in aad kala soo bixi this app Android Manager Device dukaanka Google play. Waxa kale oo muhiim ah in aad leedahay waa log account Google ee faahfaahin ah oo aad loo isticmaalo marka aad telefoonka. Isticmaalka TV aad meel fog laga raad kartaa telefoonka via internetka ama version TV rakibay. Marka aad go'aansato in aad isticmaasho internetka Tababaraha Device Android halkan ku salaysan yahay waxa la sameeyo.
Tallaabada 1 . Raadi Android version Manager Device on a browser kombiyuutarada.
Tallaabada 2 . Gal website isticmaalaya telefoonka laga badiyay Google account. Meesha ay tahay qalab aad lagu soo bandhigi doonaa oo aad la siinayo fogaanshaha sax ah. Waxa kale oo ay muujin doonaa markii ugu markii ugu danbeysay ee ay arag iyo taariikhda.
Talaabada 3 . From waxaa markaas ka dib waxaad dooran kartaa in giraan, qufulka ama tirtirid.
Sida ku xusan hore waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa Maareeyaha Device Android inay casriga ah haddii aadan ka heli karaan kombiyuutar. Booqo dukaanka Google play oo soo bixi, waxa uu phone saaxiib ee android tan iyo markii telefoonka waa laga badiyay. Oo halkaasaannu ka raac tallaabooyinkan.
Tallaabada 1 . Daar Maareeyaha Device Android. Mar kasta oo app this la geliyo si phone android waxaa sida caadiga ah la demiyo by default. Sidaa darteed, si ay u tagaan phone noqon Settings , garaac Security markaas Maamulka Device . Waxaad hadda noqon karaa macalinka Device Android by sixitaanka ku yaal oo ugu dambeyntii guji dhaqaajiso icon
Tallaabada 2 . Hadda saxiixa on app TV oo isticmaalaya telefoonka Google xisaab ku hab Guest .
Talaabada 3 . Riix icon Location dhinaca midig si ay u awoodaan in ay u arkaan in aad meesha telefoonka laga badiyay.
Codsigan waa mid waxtar leh, gaar ahaan haddii aad qortey telefoonka aad badiyay isticmaalaya xisaab Google, haddii kale waxa ay noqon doontaa waxtar lahayn. Hadda oo aad ogan meesha aad telefoon lumay, halkan waa waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
Maxaa la sameeyaa ka dib marka aad badiyay telefoonka.
Wac ama qoraal telefoonka
Marka aad ogan meesha telefoonka aad laga badiyay, waxaad sidoo kale wici kartaa ama u wac haddii meel agagaarka guriga. Si aad u hesho Doorashadan, riix badhanka Location on dibna riix on Ring inuu u soo yeedho qalab aad. Qalabka wuxuu u wici doonaa qaylo shan daqiiqo xitaa haddii telefonka ahaa in hab qarsoon. Sidaas haddii ay luntay gurigii gudaha waxaad noqon kartaa awood u maqlaan. TV kuu soo sheegi doonaa haddii aad telefoon wacay ama aan.
Fog ula socdaan oo ay u tirtiri telefoonka.
Haddii aad telefoonka ku jira xog muhiim ah oo xasaasi ah sida faahfaahinta bangiga, waxaa lagama maarmaan ah si ay u masixi si qofka hela telefoonka aan ka heli kartaa ama u isticmaali. Sidaa darteed aad u baahan tahay si ay u tirtiri by fulinaya dib warshad. Ka dib markii baafinta aad telefoonka ka badan codsiga guji Lock iyo masixi button.
Intaas ka dib, guji masixi icon dibna xaqiijin tallaabada. Content oo dhammuna wuxuu u tirtiraa doonaa telefoonka laga badiyay. Waxa kale oo aad heli doontaa ogeysiin ah oo ku saabsan xisaabta email aad ka warrami ficilkan.
Barkinta telefoonka bixiyaha wireless.
Waxa kale oo aad xiri karaan aad casriga lumay qof aan la ogalayn waxa la isticmaalayo. Waxay xannibi doono calls oo dhan cod iyo qoraalka. On Maareeyaha Device Android aad qabto doorasho ah ee dareysa telefoonka wasakheeyey.
Riix Lock icon. La keeneen in doonaa inaad gasho Lambarka taleefoonka ah in waxa loo isticmaali karaa in aad la xidhiidhi.
Abuur eraygaaga sirta ah in ay xirto aad telefoon kula ahayn password of account Google. Marka aad ugu dambeyntii guji badhanka qufulka tirada lagu soo bandhigi doonaa shaashadda telefoonka aad laga badiyay. Sidaas daraaddeed markii qof uu ogaado telefoonka isaga ama iyada la xiriiri doonaa tiro in bandhigay shaashadda.
U warran saaxiibadaa iyo qoyskaaga ee la xaday.
Aad Ugu dambeyntii u baahan tahay sheeg saaxiibadaa iyo saabsan kabashada telefoonka aad. Waxay kaa caawin doonaa in sanaanayaa aad telefoonka ka meesha uu aqoonsaday. Tusaale ahaan haddii ay meel ku wareegsan marineysa yahay, ay socon karaan dayrka ku xeeran sida aad wacdo telefoonka. Haddii aanay guriga gudihiisa ama laga yaabaa in qof ku qaatay kuu sheegi karaa shaqaalaha ammaanka.
Isticmaalka qabaal Device Android waa fudud oo sax ah. Si kastaba ha ahaatee, telefoonka laga badiyay u baahan yahay inuu qabto kartro firfircoon oo uu noqon karaa mid ay awoodaan in ay helaan internetka.
Sida loo masixi / masax ah Barzakh on Hard disk
> Resource > masixi > Sidee si ay ula socdaan oo Masax Android Phone aan Socodka Apps